News Archives - YATHAZONE
ကမ်ဘာ့အကွီး ဆုံး ရုပျကွှငျး ထရိုငျစီရာတော့ပျ ကို ကနျဒျေါလာ၇သနျးကြျောနဲ့ လလေံပဈ မောငျယဿ Big Jhon လို့ချေါတဲ့ တူးဖျောရသမြှထဲမှာ အကွီးဆုံး ထရိုငျစီရာတော့ပျရုပျကွှငျး ကို ပါရီမွို့က ဟိုတယျ ဒူရော့မှာ လလေံပဈတာ ကနျဒျေါလာ ၇.၇ သနျးနဲ့ ရောငျးထှကျသှားပါတယျ။ ရုပျကွှငျးလလေံမှာ ဈေးအကွီးဆုံးနဲ့ ပထမဆုံး ထှကျသှားပါတယျ။ ၂၀၁၄ခုနှဈက ဘူမိပညာရှငျ ဝျေါတာစတိနျဘီလျ က ဒါကိုတာတောငျပိုငျးမှာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ၆၆သနျးကြျောက ရုပျကွှငျးတဈခုကို တူးဖျောရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒိ ရုပျကွှငျးကို ဝယျသှားတဲ့သူက နာမညျမဖျောပွခဲ့ပါဘူး ၊ အမြားစုကတော့ အမရေိကားက ရှေးဟောငျးပစ်စညျး စုဆောငျး သူတဈဦးဖွဈမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ ဘဈဂြှနျ က ရုပျကွှငျးလောကမှာ …
ညဈညမျးလို့ ဝါးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတှကေို AI နဲ့ ပုံပွနျဖျောပွီးရောငျး တဲ့ ဂပြနျအိုငျတီသမားတဈယောကျကို စဖမျးပွီ
ညဈညမျးလို့ ဝါးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတှကေို AI နဲ့ ပုံပွနျဖျောပွီးရောငျး တဲ့ ဂပြနျအိုငျတီသမားတဈယောကျကို စဖမျးပွီ မောငျယဿ ဂပြနျနိုငျငံက ပှနျးဗီဒီယိုတှမှော ညဈညမျးတဲ့ အပိုငျးတှေ ကို ဆငျဆာအရ ဝါးထားရမယျဆိုတဲ့ ဥပဒရှေိပါတယျ။ အဲ့ဒိဥပဒကေိုခြိုးဖောကျပွီး အိုငျတီသမားတဈယောကျက AI ( ဉာဏျရညျတု ) ကိုသုံးပွီး ပုံအစဈပွနျဖျောကာ အှနျလိုငျးမှာ ရောငျးခမြှုတှလေုပျလို့ ဂပြနျရဲတှကေ သူ့ကိုဖမျးလိုကျပါတယျ။ မိုငျနီခြီ သတငျးဌာနအဆိုအရ တာကာဆာဂိုမွို့က မာဆာယူကီ နာကာမာတိုဆိုတဲ့ အိုငျတီသမား တဈယောကျက ဒခြိလုပျတဲ့ ဗီဒီယိုတှမှော ညဈညမျးတဲ့ အပိုငျးတှကေို ဝါးထားတဲ့နရောတှေ ကို ပုံအမှနျတှဖေျောပွီး အှနျလိုငျးပျေါမှာ ရောငျခနြပေါတယျ။ အဲ့ဒါကို ဗီဒီယိုပိုငျရှငျ ကုမ်ပဏီတှကေ မူပိုငျခှငျ့ …
တစ်ချိန်ကမြန်မာငွေစက္ကူပေါ်က လက်မှတ်ပိုင်ရှင်မောင်ကောင်းဆိုတာဘယ်သူလဲ? နှောင်းလူငယ်တွေ သိစေဘို့
တစ်ချိန်ကမြန်မာငွေစက္ကူပေါ်က လက်မှတ်ပိုင်ရှင်မောင်ကောင်းဆိုတာဘယ်သူလဲ? နှောင်းလူငယ်တွေ သိစေဘို့ မြန်မာငွေစက္ကူပေါ်ကမောင်ကောင်းဆိုတာဘယ်သူလဲ? နှောင်းလူငယ်တွေ သိစေဘို့ တစ်ချိန်ကမြန်မာငွေစက္ကူပေါ်က မောင်ကောင်းဆိုတာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ့ငွေသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာသည် မြန်မာကျပ်ငွေ ၆ကျပ်နှင့် ညီမျှသည်။မည်သည့်နိုင်ငံကိုသွားသွား အခြားငွေလဲစရာမလို မြန်မာကျပ်ငွေကို ယူသွားပြီး သုံးစွဲနိုင်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ငွေ (ငွေမာ) (Hard Currency) အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုခေတ် ထိုအခါက ငွေစက္ကူများပေါ်တွင် မြန်မာငွေ ကြေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် မောင်ကောင်း စံလင်းဟူသောလက်မှတ်များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မောင်ကောင်းဆိုသည်မှာ ပညာမင်းကြီး၊ ပထမဆုံးမြန်မာ့သမိုင်းကော်မရှင် ဥက္ကဌအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် စည်သူ ဦးကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးကောင်းအား ၁၉၀၄-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀)ရက်နေ့၌ ယစ်မျိုးမင်းကြီး …
လူမှန်နေရာမှန် နေရာပေးတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် လူကယ်ပြန် ဝန်ကြီးရာထူးကို လက်ခံတယ်လို့ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ပြော
လူမှန်နေရာမှန် နေရာပေးတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် လူကယ်ပြန် ဝန်ကြီးရာထူးကို လက်ခံတယ်လို့ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ပြော လူမှန်နေရာမှန်နေရာပေးတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးရာထူးကို လက်ခံတယ်လို့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌလဲ ဖြစ်သူ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်က ပြောပါတယ်။ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ကို အာဏာသိမ်းအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာပါ။ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သက်သက်ခိုင် ကို လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး အဖြစ် စစ်အစိုးရက ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သက်သက်ခိုင် ကို လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး အဖြစ် စစ်အစိုးရက ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ မြဝတီရုပ်သံက ည ၈ နာရီ သတင်းမှာကြေညာပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ …
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကို စစ်တပ်က အာဏာပြန်လွှဲပေးဖို့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး (၇) နိုင်ငံက ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျီ-၇ (Group of Seven) နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေက မြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၃) ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ယူကေနဲ့ အမေရိကန်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်တို့ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်ဆုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးဝင်မြင့်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းတက်ကြွလှုပ်ရှား သူတွေကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်တာနဲ့ မီဒီယာတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက် များစွားစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့စစ်တပ်အနေနဲ့ အရေးပေါ် …
ရဲများက အိမ်တွင် ဝင်ရောက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း ပြုလုပ်ပါက အိမ်ရှင်များ သိသင့်သည့် အချက်များ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ရဲများက အိမ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း ပြုလုပ်ပါက မည်သို့ တုံ့ပြန်ရမည်ကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။ အိမ်ထဲမဝင်မီ ရဲအနေနဲ့ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အထောက်အထားနဲ့အတူ ဦးစွာ ရှင်းပြဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။အိမ်ရှင်အနေနဲ့ ရဲကို တံခါးမဖွင့်ပေးမီ ရှာဖွေဝရမ်း ပါ၊ မပါ မေးရပါမယ်။ မပါလျှင် ရဲအရေးပိုင်တဲ့ အမှု ဟုတ်မဟုတ် သေချာစွာ မေးမြန်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဘာအမှုနဲ့ ရှာမလဲ၊ တိုင်တန်းချက် ရှိလား၊ တိုင်တန်းထားတာ မရှိဘူးလား စသဖြင့် မေးရပါမယ်။ ပြီးတော့ ဘာပစ္စည်းကို ရှာမလဲဆိုတာ မေးရပါမယ်။ လာရောက်ပြီး …
အင်တာနက်လိုင်းများ အပိတ်ခံရလျှင်ဖုန်းအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ “အရေးပေါ် အကြံပြုချက်”အင်တာနက်လိုင်းများ အပိတ်ခံရလျှင် မိမိတို့ ဖုန်းများအား အသုံးပြု၍ Mesh Network များဖြင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး (သို့) တစ်စုနှင့် တစ်စု ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Mesh Network App များကို ဖော်ပြပေးအပ်ပါတယ်။ “FireChat” for Android & Apple iOS”The Serval Mesh” for Android”Signal Offline Messenger” for Android”Vojer” for Apple iOS”Bridgefy” for Android & Apple iOS”Briar” for Android တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ …
အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံလို့ ရာထူးက နုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်
အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံလို့ ရာထူးက နုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ၌ နှစ် (၂၀) တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး နုတ်ထွက်လာသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်နေကြရမှု့ အားလုံးကိုလည်း သိရှိပါသည် ကိုယ်ချင်းစာပါသည်။ ဒီမတရားမှုကို လိုက်ပါ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြရသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ခဲပင်ပန်းမှု့ကိုလည်းနားလည်ပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထု အများစုသည် ယခု မတရား အာဏာသိမ်းမှု့ကို လုံးဝဆန့်ကျင်နေကြပြီ ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့်လည်း မိုးကျ ရွှေကိုများ၏ မတရားမှုများကို ကိုယ်တိုင် သိမြင် ခံစားနေကြရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများ၏ သောကကို ကူညီ ပေးနိုင်ကြရန် …
Total views : 689085